चीनलाई ‘खतरा’ देख्ने सिद्धान्त फैलँदै गर्दा बाहिरी विश्वलाई चीनबारे गहिरोसँग बुझाउनु आवश्यक छ
चीनले शुक्रबार ‘चाइना एन्ड द वर्ल्ड इन द न्यु इरा’ शीर्षकको श्वतेपत्र सार्वजनिक गरेको छ । स्टेट काउन्सिल इन्फर्मेसन अफिसले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको यस्तो सरकारी श्वेतपत्रले चीन र बाँकी विश्वको सम्बन्धबारे विस्तृतमा बोलेको छ । श्वेतपत्र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा केन्द्रित छ । यो तयार गर्नुको उद्देश्य चीनको विकासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझ्न सहयोग होस् भन्ने हो । एक शताब्दीभित्र विश्वमा गहिरो परिवर्तन भइसकेको छ र चीनको बाहिरी विश्वसँगको सम्बन्ध अहिले महत्वपूर्ण अवस्थामा छ । बलियो बनेर उदाएको चीनले संसारसँग आफ्नो सम्बन्ध कसरी बनाउँछ ? आजको दिनसम्म यस विषयमा बाहिरका व्यक्तिले त्यति साह्रो ध्यान दिएका छैनन् । एकपक्षीय दृष्टिकोण र चीनलाई ‘खतरा’ देख्ने सिद्धान्त फैलँदो छ । त्यसैले बाहिरी विश्वलाई चीनबारे गहिरोसँग बुझाउनु आवश्यक छ ।
आर्थिक सुधारका सुरुवाती दिनमा बाहिरी विश्वले चीनलाई दुई साझा तर्कका आधारमा मूल्यांकन गर्‍यो । पहिलो चीन गरिब र कमजोर छ, यो सही पनि थियो । अर्को, चीनले सुधार गर्दै छ । धेरैले के अनुमान लगाए भने सुधारको प्रक्रिया भन्नुको अर्थ कम्युनिस्ट देशबाट पश्चिमा मोडलतर्फ जानु हो । एकतर्फी रूपमा प्रचार गरिएका कारण कतिले यस्तो स्विकारे पनि । आजका दिनमा यस्ता कुराले अर्थ राख्दैन । पहिलो कुरा, चीन गरिब र कमजोर देश रहेन । ४० वर्षको सुधार र खुला बजारीकरणले चीनको अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि भएको छ, जुन सोचिएको थिएन ।
चीनको ठूलो भूगोल र ठूलो जनसंख्या नियाल्ने हो भने उसले हासिल गरेको समृद्धि र शक्ति मानव इतिहासकै चामत्कारिक उपलब्धि हो । दोस्रो, आफूलाई पश्चिमा मोडलमा ढाल्नुको सट्टा चीन आफ्नो चरित्रअनुसारकै विकासपथमा लम्किएको छ– जसलाई आज बाहिरी विश्वले चिनियाँ मोडल भन्छ ।
चिनियाँ स्टेट काउन्सिल इन्फर्मेसन अफिसले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको सरकारी श्वेतपत्रले चीन र बाँकी विश्वको सम्बन्धबारे विस्तृतमा बोलेको छ
यी दुई परिवर्तनको प्रभावस्वरूप बाहिरी विश्व र चीनको सम्बन्ध बहुआयामिक र जटिल दुवै बन्दै छ । चीनको उपलब्धि र विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा उसको योगदानलाई पछिल्ला वर्ष धेरै देशले सम्मानजनक रूपमा हेर्छन् । उसको विकासले धेरै विकासशील देशलाई प्रेरणा मिलेको छ । तर, चीनले पश्चिमा बाटो नहिँडेको र तीव्र दबाबका बाबजुद पनि हार नमानेका कारण केही पश्चिमा देशका कुलीनहरू उसबाट स्तब्ध र असन्तुष्ट छन् ।
चीन आजको समय सिंहका रूपमा विकसित भएको छ । तर, चीनले आफ्नो शक्ति कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेमा सन्देश पनि छ । हामीले चीनविरुद्ध लडाइँका क्रममा तयार गरिएको बाहिरी सन्देशलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, पश्चिमा तर्क बुझिरहेका देशलाई आश्वस्त पार्नु सहज छैन । यस तर्कअनुसार कुनै पनि देश बलियो भइसकेपछि उनीहरूले सर्वोच्चता खोज्छन्, जुन चीनमा लागू हुँदैन । यस्तो तर्क चीनका लागि निरन्तरको प्रयास आवश्यक छ ।
श्वेतपत्रले विश्वप्रतिको चीनका प्रतिबद्धताहरू झल्काएको छ । चीनको उदयका कारण सिर्जित भय र स्तब्धतालाई यसले कम गर्छ । गणतन्त्र चीन स्थापनापछिका ७० वर्षमा तीनवटा प्रमुख कुरा स्थापित भएका छन् । पहिलो, आफ्नै स्वतन्त्र प्रयासले देश निर्माणका लागि कडा मिहिनत गर्नु । दोस्रो, आपसी फाइदा महसुस गरेर विन–विन साझेदारी गर्नु । तेस्रो, सर्वोच्चताको खोजी कहिल्यै नगर्नु । यी विषयलाई ध्यान दिएकाले चीन जति धेरै शक्तिशाली बन्छ, उसले विश्वमा शान्ति र विकासको प्रवद्र्धन गर्न उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ ।
श्वेतपत्रले चिनियाँ जनताको यही खुला हृदय र सद्भावलाई बाहिर ल्याएको छ । चीनले त्यतिवेला विश्वका लागि आफ्नो ढोका खोलेको थियो, जतिवेला ऊ गरिब र कमजोर थियो । उसले शक्ति हासिल गर्दैमा आफैँलाई अलग गर्दैन किनकि हामीलाई थाहा छ, चीन र बाँकी विश्वबीचको समधुर सम्बन्धले सबैलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ ।
(चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीयबाट)
जन्मदेखिकै युद्ध : कहिले– कहिले भयो भारत र पाकिस्तान द्वन्द्व ?
भारत र पाकिस्तानबीच ऐतिहासिक सहमति, ‘नयाँ युगको सुरुवात’
मेक्सिकन जनताले चुनेका ‘ट्रम्प’विरोधी राष्ट्रपति